အရပ်ရှည်လိုသူတိုင်းအတွက် | Thaing Wizard
Posted on February 25, 2014 by Aung Thu Htet	ဒီတစ်ခါတော့ အရပ်မြင့်နည်းဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးနဲ့ စာအုပ်တွေ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အရင်ကလည်း ဆရာထိပ်တင်ထွဋ်ရဲ့”၁၄-ရက်အတွင်း အရပ်ရှည်နည်း” စာအုပ်နဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအုပ် တစ်ချို့ တင်ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိုင်းပညာနဲ့ မပတ်သတ်တာကြောင့် post အနေနဲ့ သပ်သပ် မတင်ဖြစ်ပဲ ဒီတိုင်းပဲ upload လုပ်ပြီး link တင်ထားရုံပဲ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကနေ့တော့ စာအုပ်အသစ်တွေ ထပ်လုပ်ဖြစ်တာကြောင့် အရင်စာအုပ်တွေရော၊ စာအုပ်အသစ်တွေပါ post ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ သိုင်းပညာနဲ့ မပတ်သတ်လှပေမယ့် အရပ်မြင့်လိုသူ လူငယ်များအတွက် အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။
This entry was posted in Growing Taller Article, Growing Taller Exercise, Growing Taller Exercise Book and tagged စာအုပ်, ထိပ်တင်ထွဋ်, မင်းစံအိမ်, အရပ်ရှည်လေ့ကျင့်ခန်း, ဆောင်းပါး by Aung Thu Htet. Bookmark the permalink.	Contact Detail	thaingwizard@gmail.com